गरिब र अतिविपन्नमा कोरोना परीक्षण खोइ ? – NepalajaMedia
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले सरकार आफैंले ल्याएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन उल्लंघन गरेको बताए । उनले भने, ‘ऐनमा निःशुल्क भनिएको छ । तर, सरकारी, निजी अस्पतालहरूले शुल्क असुल्दै आएका छन् ।’ यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
Prevसीमासम्बन्धी स्वाध्याय पुस्तक वितरणमा रोक
Nextविश्वका सर्वाधिक धनी १ प्रतिशतले अति गरीबको भन्दा ५० गुणा बढी प्रदूषण फैलाए : विश्लेषण